အတွေးအမြင် – The Only Way To Go!
…………………………….. အကောင်းဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ .. အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ရွေးလုပ်ရပါမယ် ။ သင်ဟာ သင့်ဘဝကို သင် ယခု ဘယ်အခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေ ရောက်နေတဲ့ ဘဝကနေ အကောင်းဆုံးဘဝ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ စိုက်ထုတ်မှုတိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့လိုတယ် လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ် .. ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှူ ချက် တစ်ခုချင်း ရှူ ရှိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် …. အကောင်းဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေကို ဖြစ်အောင် သတိထားပြီး လုပ်ဆောင် ကြိုးပမ်း နိုင်အောင်ကျင့် .. ဒါဆိုရင် သင့်ဘဝဟာ အကောင်းဆုံးဘဝ ဖြစ်လာမှာပါ .. ။ ဘာနေ 28-6-2014
Leaveacomment အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ …